Umshini "Kauryur", owenziwe ngumkhiqizi wasekhaya, uyisimo se-snowmobile, esakhiwe kuqala ngaphandle kokubheka ukufana kwamanye amazwe. "Skroen" kuhle kakhulu, naphezu komthetho ocacile we "lula - isithembiso sokuthembeka."
I-Snowmobile Kaury: izici zokuklama
Injini ye-Kauryur ye-snowmobile iyinhlangano yamandla we-GX-390 evela ku-Honda, eye yazibekela yona njengenye yezinjini ezihamba phambili ezisetshenziselwa ubuchwepheshe bamandla. Ngaphezu kwe injini enamandla ngokwanele, i-snowmobile ibuye ifakwe ne-disc yokusakazwa nge-drive hydraulic, i-variator kanye nabakaki bokumisa ngamanzi, futhi ukuxakeka okukhulu kufana ne-Izhevsk. I-gear yangemuva ayitholakali, kepha lokhu, uma ungakusho kanjalo, isici sinxephezelwa ngokuphelele ngobukhulu obukhulu bomshini ngokwawo nesisindo esincane.
Ukulimala okusobala ukungabikho kwanoma yimuphi umbonisi wezinga lokushisa, okuyinkimbinkimbi kakhulu ekugcwaliseni nasekulandeleni ukugcwala kwetangi. Futhi, i-snowmobile ayinayo imitha yehora kanye ne-odometer, naphezu kokuba wonke lawa madivaysi agxile emzimbeni wemoto. Indlela kuphela yokuphuma ukuphatha i-canister emihlanu-litre ngefutha. Ungayifaka esihlalweni, ngakho-ke kunesikhala esanele lapho.
I-snowmobile "ye-Kauryur", ebuyekezwa ngabanikazi bayo ukuqinisekisa leli qiniso, kulula kakhulu ukuphatha. Kumele futhi uqaphele ukuthi ukuhlala kuso kuhle futhi kukhululekile: imilenze igobile cishe engxenyeni efanele, ngakho-ke ayikwazi ukungena, ngesikhathi esifanayo ungakwazi ukuma uma kunesidingo - awudingi ngisho nokugoba.
Ekuboneni kuqala kubonakala sengathi isondo le-snowmobile liyingcosana, kepha ngesikhathi sokuhamba konke ukwesaba kuyasakaza - kuyinto elula ukuqhuba umshini. Isisindo sokuthutha kwesisindo asihluleki ngisho naseqhweni eliqhakazile kakhulu ngenxa yendawo enkulu esekelayo yamacimbi nama skis.
"Kayur" iyi-snowmobile, okuyinto ngeshwa ayihloselwe ukushayela yedwa nomgibeli. Abantu abadala abashisa izingubo ezifudumele esikhwameni esifushane ngeke bahlale phansi. Yiqiniso, ungakwazi ukushayela, kodwa kuzodingeka ukwenze ezindaweni ezigcwele. Lokhu ukungalungi akubhekiseli ekuthuthukisweni kokushayela, ngokuqondene nokulawulwa kwemoto yonke. Umshini ohlangene nokukhanya udinga umsebenzi osebenzayo ngomzimba ngenkathi kuhamba futhi ngisho nomgibeli oyedwa uyathinteka ekuguquleni, engavumeli abantu ababili - lokhu akukwazi ukumelana ngisho nama-snowmobiles Kaury. Ukubuyekezwa kwabazingeli kuqinisekisa lokhu - izindlela ezibalwe, ngeshwa, umshayeli oyedwa kuphela.
Ukungahleleki kwesibili yi-injini yamandla. "I-Kauryur" iyi-snowmobile, okusemandleni okweqa ngaphezu kwe-50 km / h esikhwameni seqhwa esinyathelisiwe, kodwa, emhlabathini ongenalutho umshini awunakwenzeka ukuhamba ngokushesha kunama-25-35 km / h. Ngomgibeli isimo sibuhlungu kakhulu: ijubane alidluli umgibeli ojwayelekile. Umkhawulo wemoto usika ngaphezulu kwengxenye yamandla kagesi, okwehlisa izinga lokusheshisa.
I-Snowmobile "Kauryur": izithombe nezithunzi
Kodwa-ke, naphezu kokunciphisa okubili okubalulekile, kudingeke sikhumbule ukuthi "uKauryur" yi-snowmobile, efana ne-scooter yokuhamba kwasebusika kunokuthutha kwezokuvakasha okugcwele. Izinhlangano ezifanayo kubangelwa abanikazi abaningi. I-Snowmobile "Kauryr", okubuyekezwa kwayo okuqinisekisa lokhu, ngezindlela eziningi kufana ne-scooter - kumadayimu, isisindo, ubukhulu nokulula kokulawula.
Ukuhamba cishe lutho olulinganisa umshini lulula, inqubo ayidingi umzamo ovela kumshayeli. Ngisho naseqenjini elingenalutho idivaysi ayishintshi ibe yinto engenakulizwa futhi ilalele ngokuphelele umshayeli. Ngemuva kwemizuzu embalwa ukuqhutshwa komshini "ezindlebeni" kuyeke ukuba kube mnandi futhi kuphenduka injabulo yangempela. I-snowmobile ingahamba kuphela esikhwameni esisodwa, sesiphakamise okwesibili kuya phezulu, hhayi nje kuphela emgqeni, kodwa nangesikhathi esingaqondile esingenamkhawulo. Into kuphela okufanele ihlolwe lapha yilo ukuthi isibungu singagxuma ngenxa yezinkinga ezimbi. Ngakho ngaphambi kokwenza izinyathelo ezinjalo kubalulekile ukuhlola isondo.
Ukuhamba nokumiswa kwamakhono
"Kauryur" iyi-snowmobile, efana ne "ithoyizi" kunezokuthutha ezokuvakasha okugcwele, ngakho-ke ukulindela into engacatshangwa kuyo akufanelekile. Naphezu kwalokhu, ungamenza agxume. Uma kunesidingo, i-snowmobile ingakwazi ukumelana nokukhwabanisa kanye nesithonya esilandelayo kusukela ku-parapet enobude bemitha eyodwa, kepha namanje akusiyo yale njongo. Ngisho nalapho befika ukusuka ekuphakameni kwamashumi amasentimitha ambalwa, ukuxakeka kokushaqeka kusebenza kuze kube yilapho kuphazamiseka, okuyinto, ngokufanele, akuzuzanga i-snowmobile noma i-vertebrae yomshayeli.
Endaweni engaziwa kwi- "Kauryu" kungcono ukuthi ingasetshenziswanga - ukumiswa kwayo, ngeshwa, ayinayo indawo yokugcina amandla.
I-snowmobile "Kayur": izici zobuchwepheshe nemingcele
I-ITlan-Kayur "yezomnotho neyinkimbinkimbi - i-snowmobile yokuqala yasekhaya, eyadalwa, njengoba sekushiwo ngenhla, ngaphandle kokusebenzisa isipiliyoni sangaphandle. Kule ntuthuko, abakhiqizi babegxile ezintweni zokusebenza ezimweni zemigwaqo yaseRussia futhi bathatha njengesisekelo isipiliyoni kanye nempendulo yabazingeli, abadobi nabagibeli. Umshini oholelekile usayizi obuncane futhi ulula ngesisindo, okuthinta ngokuqondile ukuhamba kwawo. Inzuzo enkulu ye-snowmobile yiyona ndlela yokuhamba kwayo kwi-trailer evamile yezimoto, ezingabangane bayo bangaphandle.
I-injection ezine-stroke, enezidingo zokuthutha, inikeza izinga elanele lokubheka, okuvumela ukuba uhambe hhayi kuphela emikhondweni enyathelisiwe, kodwa futhi endaweni ejulile evulekile. Igumbi lamandla yiJapane Honda GX390, ehlangabezana namazinga e-Euro 2 futhi inamandla angu 13 engamahhashi ane-torque engu-3,600 rpm. Injini ngokwayo ithathwa ngokuthi "ayibulawe" - iwaranti eyodwa kuphela enikezwa ngamahora angu-1500, okuyinto enhle kakhulu emotweni enjalo. Futhi ngokuphathwa kahle nokusetshenziswa kweoli ephezulu ye-injini, ukuphila kwayo ukusebenza kungenziwa okungapheli ngempela.
Amacimbi agxile ku "Kauryur", izinga elijwayelekile elithi "Buran", kodwa banamabhakede ahlukene ngaphansi kokumiswa kwesitimela. Zakhiwa yi-ZAO "Okuhlanganisiwe". Imikhiqizo yalo mkhiqizi ihlolwe ngokuphindaphindiwe ngezimoto zeqhwa ezifanayo zohlobo elithi "Buran" ne "Taiga". Izimpahla zingabizi futhi zithunyelwa ngesikhathi esifushane. Isisindo esomile semoto sincane - cishe ngo-120 kg. Ubuningi obunjalo bufinyeleleke ngenxa yokusetshenziswa kohlaka oluthile oluthile oluthile olwenziwe ngokusebenzisa ama-cutter leaf cutters kanye nabahlezi bezinhlelo.
Lena izici ezinhle kakhulu zobuchwepheshe. Ukuphathwa nokuzikhandla kwe-snowmobile kwenza kube yimoto ebalulekile abazingeli nabadobi.
Izindleko ze-snowmobile ka-Kauryur
Lezokuthutha kungokwesigaba samanani aphansi. Izindleko ze- "Cajur" zixhomeke kokucushwa kanye nezinketho futhi ngokwesilinganiso yizinkulungwane ezingu-160-163 ze-ruble. I-snowmobile ingayenza futhi ishibhile kangcono uma injini ye-KAYUR-420 efakwe kuso, kunokuba ibe yinto evamile kusuka ku-Honda. Yiqiniso, sekude kakhulu kumayunithi ajwayelekile, kodwa uma udinga imoto encane ukunyakaza okusheshayo nokunethezeka, ke "i-Kauryur" iyindlela enhle ngokulinganisela kwezinga lentengo.
Ukufingqa konke okushiwo ngenhla, singasho ukuthi i-snowmobile ye-Kauryur iyithutha elihle kakhulu elinikezwa emakethe yasekhaya. Kuyinto enhle kulabo abangakwazi ukuthenga nokugcinwa kwedivayisi egcwele.
Yiqiniso, naye unezinkinga zakhe - amandla anganele, akwazi ukuhambisa imithwalo noma umgibeli. Naphezu kwalokhu, "uKauryur" inezilinganiso ezincane nezisindo, ithatha isikhala esincane egaraji, ingenakuzithoba ekunakekelweni futhi ifakwe inamba yamandla omuhle, ehlukaniswe ngokuthembeka nokulula. I-snowmobile ilungele labo abafuni ukuphinda baqaphele udumo nomkhiqizo, kodwa ngesikhathi esifanayo ufuna ukuthola imoto yemfanelo.
Cyprus izimangaliso zokusebenza isithonjana UnguNina KaNkulunkulu